Asia art inobatidza musika wepasi rose
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Asia art inobatidza musika wepasi rose
Nenguva dza20:00 musi wa18 Mbudzi, kopi shoma yeIntegrated Digital Art (IDA) yeDetailed Portrait of Rivers and Mountains naFu Baoshi (1:1) yakaunzwa kuti inotengesa naRongbaozhai wekuChina, ine nhoroondo yemakore 350 uye. dzimba dzinoshanda kubva kumagariro mana ekare. IDA yakapihwa kuburikidza neIP.PUB, inobatana neSeud Technology. Okisheni iyi yakatambirwa nemushandisi EASTIP paOpenSea, hombe yedhijitari yekutengesa art yepuratifomu munyika.
Iyo IDA vhezheni yeDetailed Portrait yeNzizi neMakomo inomiririra yakasarudzika pendi yenzvimbo, ine brashi uye mavara ari mune yechinyakare Chinese maitiro, asi ayo maumbirwo uye kuunganidzwa kwemavara kunoreva izvo zveWestern oil pendi. Kukosha kwayo kwehunyanzvi kwakakonzera hondo yekubhidha muOpenSea auction, uye imwe pendi yaFu Baoshi yakatengeswa CNY 187 miriyoni paauction munaJune 2017.
Mushure memaawa maviri ekukwikwidza kunotyisa, IDA# 800002 # 00001, Detailed Mufananidzo weNzizi neMakomo yakazohwinwa nemushandisi, pamutengo weUS$13785.53. Aka kakanga kari kekutanga chidimbu chehunyanzvi hwechiChinese chichipinda mumusika wepasi rose chakabatana ne blockchain tekinoroji, uye zvakapa nzira itsva yekuti nyika ione hunyanzvi hwekuMabvazuva, uye kunzwa izwi reChina.
Iyo IDA inoburitswa pasi peiyo chaiyo-zita rekunyoresa sisitimu paIP.PUB webhusaiti, yakavakirwa paWenchang Chain yeBSN Open Consortium Blockchain, iyo inoenderana neChinese mirau. Kuburikidza nekupatsanurwa kwekuunganidzwa kwehunyanzvi hwepanyama kubva kuzvitupa zvevaridzi vedhijitari, yega yega IDA yevaridzi vedhijitari uye kuyerera kwemaitiro kunogona kuteedzerwa zvakajeka uye nekusimbiswa chaiko.
Kana IDA zvitupa zvevaridzi vedhijitari zvinotengeswa pasi rose, zvinotamiswa kubva kuWenchang kuenda kuEthereum kuburikidza neiyo cross-chain tekinoroji IRIS Hub (aka IRISnet). Ethereum inobva yabatana neOpenSea nedzimwe shanduko dzepasi rose dzinogona kutsigira zvinodiwa zvekuteedzera kwenzvimbo dzakasiyana dzemutemo. Izvi zvinopa musika wepasirese ine regulation-hushamwari inovimbika Oriental art, ine mavambo anoteedzera.
EASTIP ichashandisawo OpenSea kuvhura maIDA kune mamwe anozivikanwa ekuMabvazuva maartwork, akadai saQi Baishi's Pattra Leaves Insect Painting uye Li Keran's Fisherman's Song paCrear River. Ramba wakatarisa kuti uone kana aya mabasa akakosha etsika kubva kune mamwe mana ekare ebudiriro achapenya nemavara matsva mushure mekubatanidzwa kweNFT neIDA tekinoroji!